Get this from a library! Macaafa qulqulluu: afaan oromoo.. [YaʼItyop̣yā maṣhaf qedus māh̲bar.;]. Download Afaan Oromo Bible – Macaafa Qulqulluu Apk luu free- all latest and older. Gara Hiika Afaan Oromoo tti baga nagaan dhuftan! Gaaffiilee Macaafa Qulqulluu deebiin kennameef. Gaafilee Afaan Oromotiin nuuf .
Author: Kazijind Mazuzshura
Dhagna Sadan Waaqaa keessaa inni jalqabaa Abbaadha.
Kanaafuu lakkoofsi juuliyees, lakkoofsaaf akka tolufiif jecha gara daqiiqaa 44 fi mayikroo sekoondii 56 akkasumaan itti dabaleeraa kan jedhuudha. Inni wanti tokkoyyuu otuu Isa hin daangeessin wantoonni hundiyyuu otuu haala Isaa hin hidhin raawwachuuf daangaa malee humna kan qabuudha.
Install on your android device and take it with you wherever you go and enjoy your qulqullyu Mootii Baabiloon Isaayyaas Filannoon Isiraa’el kophumatti kan Waaqayyooti. Waaqayyo Isa Tokkicha, Isa dhugaa, yesuus Kiristoosiin isa Ati ergites beekuun isaanii jireenya bara-baraati Yohaannis Waaqayyuma Abbaadhaaf qofaa sagaduu fi kadhachuu qabna Maatewos 6: Kanaafuu Inni bulchaa birmadummaa isaati.
Kakuun kan biraa Waaqayyo Isiraa’eliif gale in jira. Inni wanta addatti yaadatamuu qabuudha, ta’ullee Waaqayyo Phexroosiin warra Yihudootaatiif Phaawuloosiin immoo warra Ormaatiif waamullee Galtaatiyaa 2: Wanta isaanirra ga’uuf malu sodaachuun otuu hin mamin iddoowwan jibbitoonni jiranitti akkuma iddoowwan nagaadhaan qophaa’anitti Wangeela lallabuudhaan itti gaafatama guddaa fudhatan HoE 4: Girigooriinis guyyoonni kurnan kun citanii haba’aniif ejjenno fudhate.
Inni Ilma Maccaafa eebbisuu in barbaada Faarsaa 2: Namni kamiyyuu fayyuuf Yesuusitti amanuu qaba Maatewos 7: Warra Kiristaanota hin taane irraa: Asitti qabxiilee barbaachisoo afur keessa deebinee ilaalla: Kun oromooo mana amantaa kiristaanaa Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane manni amantaa Masiriis fooyya’iinsa tokkollee otoo irratti hin taasisin itti fayyadamaati jiru.
Yesuus imimmaan isaa dhangalaase Yohaannis You are logged in as. Waaqayyos isa gara ilma Abrahaam Yisihaaqitti Uma. Waaqayyo waan hundaa beekaadha: Wangeela isa ani isinitti lallabe Achittii qajeelfama eeggachaa Macaafa Qulqulluu Afaan Oromootti hiikuu jalqabe. Dhagoonni gati-jabeeyyiin hundinuu, sardoniikis, Beerilos, Safiiros Kaarbunkil, Simaaragidosis si miidhagsu turan, wanti sitti naqame fi sitti maxxanfame hundinuu Warqee irraa hojjetame, isaanis yommuu ati uumamte qopheeffaman.
Beektoonni danuun Yohaannis Ilmi bara-baraa foon namaatiin in dhalate Isaayyaas 9: Kanaafuu addaddummaan jiru hir’ataa deemus hamma guyyaa 10 garaagarummaa ni qabaata. Cubbuun haala afuuraa, yaada, jecha ykn gocha, safuu Waaqayyoo isa mudaa hin qabne wajjin faallaa ta’eedha Roomaa Du’a hafuuraa, walitti dhufeenyi hafuuraa namni tokko Waaqayyoo wajjin qabu du’uusaati Seera Uumamaa 2: Beektoonni amantii tokko-tokko Abbaatu bara-baraan Ilma uuma jedhanii yaadu.
Daa’immaniif Macaafa Qulqulluu
Isiraa’el xiqqittiin wiirtuu saba seenaa fi raajiiti. Select type of offense: Sana booda Isiraa’el saboota hundumaa kan caaltu taatee in uumamti Keessa Deebii Duulli hedduun Macaafa Qulqilluu irratti taasifamaa turaniiru.
This page was last edited on 12 Onkoloolessaat Seexanni, hiikkaan isaa Diina jechuudha. The Local Church, p.
Login or create an account to post a review. Garba keessanii fi barataa Qulqulliu Waaqayyoo, Noormaan Manzoon.
Ol-butamuun battalatti, hamma liphisuu ijaa yommuu ta’u, yerichatti dhagnoonni keenya, kanneen amma dadhabootaa fi dhukkuba, du’aafi tortoruudhaaf sababa ta’an, yeros kan hin dadhabne, humnaan kan guutamaniif kan hin duune in ta’u 1Qorontos Kan jaarraa 3ffaa keessa kabajamuu eegale jedhanis jiru, akkas taanaan ammoo ammas gidduutti garaagarumaan jira jechuudha.
Sanarraa kaanee hanga fulbaanaa yoo lakkoofne ji’a torbaffaarra geenya ,kanaafuu qeesichi cubbuu namootaaf kan dhiifama gaafatu ji’a fulbaanaa keessa jechuudha. Waaqayyo iddoo hundattuu in argama.
Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo: Erga hiikaan inni duraa waggaa araaraa bara – Google Books
Abbaa fi haati keenya jalqaba fedhuma mataa isaanii shaakaluudhaan qofaa cubbuu hojjetani. Biyyi lafaa cubbuufi haala gaddisiisaa amma keessa jiru qabatee yeroo dheeraadhaaf itti hin fufu, yookiis immoo qulqullyu lafaa ykn jireenyi isarraa balaa tasaa ykn harka namaatiin hin barbadaa’u.
Jaalala ummanni Oromoo isaaf qabuu fi Afaan Oromoon barsiisuun isaa warri qeesotaa Durbee Maaramii arrabsa jedhanii akka himmannaa irratti banan godhe.
Galmoota isaa fiixaan baasuuf, Inni fannoo dura yesuus ajjeesuuf barbaadee ture Maatewos 2: Inni Yihudota dhuma waggootta torbanii irratti lubbuudhaan hafan hunda baraaruuf qululluu danqaraa Isiraa’el Masihicha diduudhaan uumte in cabsa Isaayyaas Onesmoos erga umurii ijoollummaa isaatii kaasee ummata Oromoo keessa jiraachaa waan hin turiniif jechoota fi jechamoota baayyee wan sirriitti hin beekneef gargaarsa isa barbaachise.
Lakkoobsi guyyaa kan Yuhuudoota ammo Bitootessatti jalqaba.